Imodeli yokuqala yeTesla 3 iya kufika kwimarike ngaphambi kokuphela kukaJulayi | Iindaba zeGajethi
Imodeli yokuqala yeTesla 3 iya kufika kwimarike ngaphambi kokuphela kukaJulayi
I-Tesla iye yaba sisalathiso ekumele siyilandele kwicandelo leemoto, hayi kuba sele ikweli candelo iminyaka emininzi, oku kungenjalo, kodwa kuba ukusungulwa kwayo iyeyona nkampani ikhethe izithuthi zombane. Ngexesha leminyaka yokuqala, olu hlobo lwesithuthi babenexabiso elingaphezulu kwe-100.000 euros.
Kodwa umbono ngekamva lika-Elon Musk, umseki kunye ne-CEO yangoku yeTesla, yayikukuzama ukunika obu buchwephesha kwelona nani liphezulu labantu, ngokunciphisa ixabiso layo. Imodeli 3 sisithuthi sasesitalatweni sokuqala esiza kuqaliswa yinkampani kwintengiso ngexabiso elifikelelekayo, ukuqala kwi-30.000 yeedola. Kwaye iiyunithi zokuqala ziya kwenza njalo phambi kokuphela kukaJulayi.
NgoJulayi 28, abantu bokuqala abangama-30 abagcina le modeli intsha baya kufumana izithuthi zabo, njengoko uElon Musk ngokwakhe wabhengeza ngeakhawunti yakhe yeTwitter. I-Tesla yakha iigigafactories ezininzi ukuze ikwazi ukuvelisa inani elikhulu le-odolo olifumeneyo kule modeli, ngexabiso eliphantsi kwaye njengoko iinyanga zihamba, inani lezithuthi ezishiya iifektri liyonyuka.
Nge-Agasti kulindeleke ukuba iiyunithi ezili-100 zihanjiswe, ngo-Septemba malunga ne-1.5000 kwaye ngaphambi kokuphela konyaka inkampani iya kuba ilungele ukuqala ukuhambisa ukuya kuthi ga kwizithuthi ezingama-20.000 XNUMX zale modeli kubathengi abayigcinileyo. Okwangoku Ipotifoliyo ebekelwe iimodeli 3 eUnited States iyodwa ifikelela kwizithuthi ezingama-400.000.
Kodwa izicwangciso zikaTesla zikwabandakanya iYurophu, apho le modeli ingazukufika kungekudala, kodwa kunokwenzeka ukuba xa iqala ukwenziwa ukusukela amarhe amva nje ajikeleze inkampani ithi uElon Musk ufuna indawo. ukwenza umzi mveliso omkhulu weTesla eYurophu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Imodeli yokuqala yeTesla 3 iya kufika kwimarike ngaphambi kokuphela kukaJulayi
I-Elitetorrent yehlisa iimfama kwiminyaka eli-13 kamva
I-LG ibeka i-LG G Pad IV 8.0 entsha yoyilo lwangaphezulu kunye nexabiso elinomdla